SD oo la safatay garabka Alliansen oo kalsoonidii kala noqday saddex wasiir xukuumadda xubno ka ah
Xisbiyada mucaaradka dalkaan oo dalbadey casilaadda saddex wasiir
Xisbiyada mucaaradka ee Alliansen ayaa shir jaraa'id oo maanta qabteen waxey ku sheegeen iney kalsoonidii kala laabteen saddex wasiir oo ka tirsan golaha xukuumadda ee Stefan Löfven, sida ey sheegeen hoggaamiyeyaasha afarta xisbi ee mucaaradku.
Cabdirisaaq Diirshe iyo siduu u arko rikoorkiisii ninka jabiyey.. (7:16 min)
Ciyaaro. Orod-yahanka iswiidhishka ee lagu magacaabo Andreas Kramer ayaa dhigay rikoodh cusub ee orodka 800 ee mitir mar uu ka tartamayay Karlstad GP. Rikoodhkan oo uu hore u dhigay ciyaaryahan soomaaliyeed oo layidhaahdo Cabdirisaaq Diirshe.
Xidhiidhka booliska iyo gargaarka degdegga oo dib loo eegayo
Wada shaqeeynta booliska iyo ambalaasta ayaa dib u eegis lagu sameeynayaa.
Booliska iyo ambalaaska. Wada shaqeeynta iyo wada xidhiidhka booliska iyo shaqaalaha caafimaadka degdega ah ee deegaanka Stockholm ayaa la sheegay in uu liito, taas oo hada keentay in dib u eegid lagu sameeynayo hanaanka wada shaqeeynta ee labadan haayadood.
Sweden – oo gashay kaalinta waddanka ugu nolol macaan Khadra: Soomaaliyana waxaan rajeeyn inay mustaqbalka heerkaa gaari doonto
Mahadi ha ka gaartee dooqa wanaag-san ee nolosha oo ey ka mid yihiin hodan-nimada, sinnaanta, caafimaadka, hab nolol wanaagga, waxey sabab u noqdeen inuu dalka Sweden ka sare maray 162 waddan ee caalamka ka tir-san.
Wakaaladda socdaalka oo ka go'aan gaari doonta dalabaad ka tiro yar
Wakaaladda socdaalka ayaa qiimeeynaysa inay go’aan ka gaari doonto sannadka tiro 25 000 ka yar oo dalab magan-gelyo middii ay horay u saadaalinaysay. Halka wakhtiga uu go’aanku qaato uu caadi ku soo noqon doono ugu horreeyn bartamaha sannadka foodda innagu soo haya ee 2018, sida uu qoray war-geeyska Dagens Nyheter (DN).
Caawa tuma ayaa guusha hanan doonta Sweden mise Italy? SwedenItalyBarbar dhacRöstaVisa resultat 1 dag
Ma dhacdaa inaad khudrad cunto badalkii hilibka lo'da?HaaMayaKama fekerinRöstaVisa resultat 1 dag